DEG-DEG: Manchester City Oo Ku Dhawaaqday Heshiiska Xiddigii Ay Ku Garaacday Manchester United - GOOL24.NET
DEG-DEG: Manchester City Oo Ku Dhawaaqday Heshiiska Xiddigii Ay Ku Garaacday Manchester United
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday heshiiska weeraryahanka Julian Alvarez oo ay ku garaacday deriskeeda Manchester United oo hore qarka ugu saarnayd.
Xiddigan reer Argentina ee ay da’diisu tahay 22 jirka ayay Manchester City ka iibsatay kooxda reer Argentina ee River Plate oo uu wacdaro ka dhigayay xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyey.
Julian Alvarez ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sannadood iyo badh ah, waxaana uu sii joogi doonaa kooxdiisa ka dhisan Boenos Aires illaa dhamaadka xilli ciyaareedka, isaga oo Etihad Stadium iman doona bisha June ee sannadkan.
Manchester City ayaa Julian Alvarez ka bixisay lacag dhan £17 milyan oo Euro oo ah lacagtii lagu burburin karayay qandaraaska uu da’yarkani kula jiray kooxdiisa River Plate, hase yeeshee City ayaa heshiiska ku dartay qodob dhigaya inuu sii joogo kooxdiisa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
Txiki Begiristain oo ah agaasimaha ciyaaraha Manchester City oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay muddo dheer kooxdiisu ku raad-joogtay da’yarkan, balse ugu dambayntii ay gacanta ku dhigeen.
Julian Alvarez ayaa safka tababare Pep Guardiola la bilaaban doona xilli ciyaareedka dambe, isaga oo qayb ka noqon doona kulamada xagaaga ee ay kooxdu iskugu diyaarinayso xilli ciyaareedka soo socda.
Laacibkan ayaa 46 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah oo uu u saftay River Plate waxa uu u dhaliyey 24 gool, waxaana lagu daray xulka qaranka Argentina ee ka qayb-gelaya kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka, waxaana la filayaa inuu booskiisa xoogsado Koobka Adduunka ee dhamaadka sannadkan lagu qaban doono waddanka Qatar.